Sawirka Dr. Joseph Tkach, Kaniisadda Caalamiga ah ee God Switzerland (WKG)
Joseph Tkach waa wadaadka guud iyo maamulaha shirkadda « Kaniisadda Ilaah ee Adduunka » , WKG gaagaaban, Ingiriis " Church of Worldwide ee Ilaah ". Laga soo bilaabo Abriil 3, 2009 kaniisadda ayaa dib loogu magac daray" Grace Wadaagga Caalamiga ah » . Dr. Tkach wuxuu u adeegsaday Kaniisadda Adduunka ee Ilaah sidii wasiir loo magacaabay ilaa 1976. Wuxuu u adeegay bulshooyinka ku nool Detroit, Michigan; Phoenix, Arizona; Pasadena iyo Santa Barbara-San Luis Obispo.
Aabihiis, Joseph W. Tkach sen., Waxaa loo magacaabay Dr. Tkach ilaa Wadaadka Guud. Tkach kii weynaa wuxuu dhintey Sebtember 1995 markii Joseph Tkach noqday wadaad guud.
Dr. Tababbarka Tkach waxaa ka mid ahaa inuu dhigto jaamacadda Ambassador illaa 1969 ilaa 1973, halkaas oo uu ku qaatay shahaadada Masterka ee cilmiga fiqiga. Sannadkii 1984 wuxuu shahaadada ka qaatay maamulka maamulka ganacsiga ee jaamacadda Western International University ee ku taal Phoenix, Arizona. Bishii Meey 2000, wuxuu ka helay shahaadada cilmiga cilmiga fiqiiga ah Jaamacadda Azusa Pacific University, Azusa, California.
Khibraddiisa xirfadeed markii uu ahaa shaqaale bulsho ayaa ka soo bilaabay 1976 halkaas oo uu ka soo shaqeeyey Arizona Boys Ranch, oo ah urur gaar loo leeyahay. Meelaha uu mas'uul ka ahaa waxaa ka mid ahaa horumarinta iyo hirgelinta barnaamijyada dhaqancelinta ee loogu talagalay dembiileyaasha da'da yar. Laga soo bilaabo 1977-kii ilaa 1984, wuxuu u shaqeeye ka ahaa arrimaha bulshada ee gobolka Arizona. Wuxuu la macaamilay talaabooyin taageero ah oo loogu talagalay fursadaha horumarineed ee dadka dhibaatadu ka haysato arrimaha bulshada. Laga soo bilaabo 1984 ilaa 1986 wuxuu u shaqeeyey shirkadda Intel Intel ee Phoenix, halkaas oo uu madax uga ahaa waaxda sii wadista waxbarashada ee qaybta adeegga. Sannadkii 1986 ayuu shaqaalaysiiyay maamulka kiniisadda ee Kaniisadda Adduunka ee God.
Koritaanka Masiixiga, wacdinta iyo midnimada ayaa aad muhiim ugu ah Joseph Tkach. Wuxuu ka shaqeeyaa guddiga ururka ee Evangelicals National sidoo kale wuxuu u shaqeeyaa golaha la-talinta ee Ururka Baybalka Baybalka ee Mareykanka. Markay tahay Howlgalka Mareykanka, wuxuu taageeraa iskuna xiraa shabakad Masiixi ah oo ku saabsan barida aan kitaabiga ahayn ee diimaha kale. Wuxuu sidoo kale ka shaqeeyaa guddiga doctoral ee Jaamacadda Azusa Pacific University. Wuxuu kaqaybqaataa shirarka sanadlaha ah ee gobolka iyo kuwa caalamiga ah ee lala yeesho hoggaamiyeyaasha Kaniisadda Adduunka ee Ilaah si kor loogu qaado koritaanka Masiixiga, fikradaha la isdhaafsado, lagana wada hadlo himilooyinka kiniisadda ee sannadka soo socda.
Wuxuu ku dhashay Disembar 23, 1951 magaalada Chicago, Illinois, wuxuuna inta badan caruurnimadiisii ​​halkaas ku qaatay ilaa waalidkii ugu dhaqaaqay Pasadena 1966. Isaga iyo afadiisa Tammy waxay is guursadeen 1980. Waxay leeyihiin wiil, Joseph Tkach III, iyo gabadh, Stephanie.